January 15, 2020 - ThutaSone
နှလုံးသွေးကြောကျဉ်း ရောဂါနဲ့ပတ်သက်လို့ “လုံးဝ အာမခံပါတယ်” ဆိုတဲ့ဆေး
January 15, 2020 ThutaSone 0
နှလုံးသွေးကြောကျဉ်း ရောဂါနဲ့ပတ်သက်လို့ “လုံးဝ အာမခံပါတယ်” ဆိုတဲ့ဆေး နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းတယ်ဆိုတာက နှလုံးမှာရှိတဲ့ သွေးလွှတ်ကြောနှင့်သွေးပြန်ကြောတွေအတွင်းမှာ စားထားသမျှ အဆီအနှစ်တွေဟာ သွေးလမ်းတစ်လျှောက် ပိတ်ဆို့နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် နှလုံးသွေးကြောတွေအတွင်းမှာ အဆီဆို့ပြီဆိုတာနဲ့ သွေးကြောများဟာ ကျဉ်းမြောင်းပြီး သွေးလှည်ပတ်မှုမမှန်မကန်ဖြစ်၍ နှလုံးသွေးလုံလောက်မှုမရရှိခြင်းကြောင့် ရင်ခုန်နှုန်းမြန်ခြင်း၊အသက်ရှုမဝခြင်းအပြင် ရုတ်တရက် လဲကျသေဆုံးတတ်ပါတယ်။ ဒီဝေဒနာကို ကုစားဖို့ဆိုရင် သဘာဝဆေးနည်းတွေအများကြီးရှိသည့်အနက်မှ […]
ဦးဇင်းဟာ ဒီဆေးနည်းကြောင့်” ကျောက်ကပ်ယောင်၊ကျောက်ကပ်မှာ ကျောက်တည်တာ ပျောက်သွားပါပြီ”…
‘မဟာအဆိပ်ဖြေဆေး လယ်ကန်စွန်းရွက် ၁.သွေးကင်ဆာ ၂.အသဲရောဂါ ၃.ကျောက်ကပ်ရောဂါ ၄.ဆီးကျောက်တည်ရောဂါ ၅.နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ ၆.အမောအပန်း အဆုတ်ရောဂါ ၇.ဖောခြင်း ရောင်ခြင်းရောဂါ ၈.ရင်သားကင်ဆာရောဂါ ၉.အရက်ကြောင် ဆေးကြောင်ရောဂါ စတဲ့ရောဂါများအတွက် လက်တွေ့ပျောက်ကင်းသော နွယ်မြက်သစ်ပင် ဆေးနည်းများ ရှိပါသည်။ ကျောက်ကပ်ရောင် ကျောက်တည် ဝေဒနာရှင်များအတွက် ဆေးနည်း လယ်ကန်စွန်းရိုးနီ ၁၅ […]
”ကြိုးဆွဲချ အမျိုးသမီးငယ်၏ ဝိညာဉ် မိခင်ကိုဝင်ပူးပြီး လုပ်ကြံခံရသည်ဟု” ပြောသဖြင့် ပြန်အမှုဖွင့်ရန် စီစဉ် ….
ကြိုးဆွဲချ အမျိုးသမီးငယ်၏ ဝိညာဉ် မိခင်ကိုဝင်ပူးပြီး လုပ်ကြံခံရသည်ဟု ပြောသဖြင့် ပြန်အမှုဖွင့်ရန် စီစဉ်နေ ပဲခူးမြို့ ဇိုင်းဂနိုင်းမြောက်ပိုင်းရပ်ကွက်၌ လွန်ခဲ့သော သုံးရက်က ကြိုးဆွဲချသေဆုံးခဲ့သော အမျိုးသမီးငယ်၏ ဝိညာဉ်မှ အသုဘချခါနီး မိခင်ဖြစ်သူအား ဝင်ပူးသည်ဟုဆိုကာ သူ့ကို အခြားသူက လုပ်ကြံသည်ဟု ပြောဆိုသဖြင့် မိဘများက ရဲစခန်း တွင် […]
“ချစ်သား အာနန္ဒာ..ဘာကြောင့််များ ပူဆွေး ဝမ်းနည်းနေရတာတဲ့လဲ?လောကမှာ ဖြစ်ပြီးရင် ပျက်ရတယ်ဆိုတာကို နှလုံးသွင်းမှပေါ့” ကုသိနာရုံပြည်ရှိ မလ္လာမင်းတို့ ပျော်မော နှစ်ခြိုက်ကြရာ အင်ကြင်းဥယျာဉ်သည် ဥယျာဉ်တွင်း ၌ ထူးကဲစွာပေါက်သော အင်ကြင်းနှစ်ပင်ကြား၌ မြောက်အရပ်ကို ဦးခေါင်းပြုကာခင်းထားခဲ့သည့် ညောင်စောင်းထက်ဝယ် ဘုရားရှင်သည် ပင်ပန်း နွမ်းနယ်လှစွာဖြင့် လဲလျောင်းလျက်ရှိချေသည်။ ထိုအချိန်ကားဘုရားရှင်အတွက် နောက်ဆုံးအချိန်ပင်ဖြစ်ချေသည်။ […]
”ဩစတြေးလျ တောမီးလောင်လို့ ရေငတ်နေသော ”ကုလားအုတ် ၁၀၀၀ ကျော်”ကို သေနတ်ဖြင့် ပစ်သတ်”….
ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေက လောင်ကျွမ်းခဲ့တဲ့ သြစတြေးလျတောမီးကြောင့် တိရစ်ဆာန်သန်းနဲ့ ချီ သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်သန်းနဲ့ချီပြီးလည်း မီးလောင်ရာဒေသကနေ ထွက်ပြေးခဲ့ကြရပါတယ် အဲဒီလို မီးဘေးကြောင့် ဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့ တိရစ်ဆာန်တွေထဲက ထောင်နဲ့ ချီတဲ့ ကုလားအုတ်တွေကို သတ်ပစ်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်…. မီးလောင်လို့ ထွက်ပြေးလာကြတဲ့ ကုလားအုတ်တွေဟာ ရေအရမ်းဆာတာကြောင့် နယူးဆောက်ဝေးလ်စ်ဒေသမှာရှိတဲ့ လူနေအိမ်ခြံဝင်းတွေထဲ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ပြီး ရေတွေသောက်နေကြတာပါတစ်ခါသောက်ရင် […]
သရဏဂုံ မြဲသူများအတွက် ထီပေါက်စေသည့် ဂါထာတော်
ထီပေါက်ဂါထာ ပါဠိတော် ဧတဒဂ္ဂံ ဘိက္ခဝေ မမသာဝကါနံ ဘိက္ခူနံ ပဌမံ သလာကံ ဂဏှန္တာနံ ယဒိဒံ ကုဏ္ဍဓာနော ဧတေနသစ္စဝဇ္ဇေန တထာမေဟောတု သဗ္ဗဒါ (ကံထူးကံကောင်းကြပါစေဗျာ) မှတ်ချက်။ ။မိမ်ိနိုင်သလောက်သာ အဓိဌာန်ပြုပါ။ ဂါထာမရွတ်မီ သရဏဂုံတည်ပါ။ သရဏဂုံမပျက်ပါစေနဲ့။ Shwe Ba Unicode ထီပေါကျဂါထာ […]
နဝမတန်းအောင်မြင်သူများကို နေ့စားလပေး မူလတန်းပြ ဆရာ၊ဆရာမများလုပ်ရန် ခေါ်ယူ…(တခြားသူများသိအောင် မျှဝေပေးပါအုံး)
ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက် ပိုင်း) မိုင်းဆတ်ခရိုင် မိုင်းတုံမြို့ နယ်ရှိအခြေခံပညာကျောင်းများ တွင် ဆရာ၊ ဆရာမလိုအပ်ချက် ကြောင့် အနိမ့်ဆုံးနဝမတန်း အောင်မြင်ထားသူများကို နေ့စား လပေးမူလတန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ အဖြစ် ခေါ်ယူခန့်ထားရန် ပညာ ရေးဝန်ကြီးဌာနက ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ ဆရာ၊ ဆရာမလိုအပ်သော ကျောင်းတည်ရှိရာ ကျေးရွာ၌ နေထိုင်သူများ၊ ကျေးရွာ […]
တစ်ကမ္ဘာလုံးသို့ ဝူဟန်အဆုတ်ယောင် ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ပျံ့နှံ့နိုင်
တစ်ကမ္ဘာလုံးသို့ ဝူဟန်အဆုတ်ယောင် ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ပျံ့နှံ့နိုင် တရုတ်နိုင်ငံမှ စတင်ဖြစ်ပွားလာသည့် ထူးဆန်းသည့် ဗိုင်းရပ်စ်မှာ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းသို့ပျံ့နှံ့နိုင်ခြေရှိနေခြင်းနှင့်အတူ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှ ဆေးရုံများအနေဖြင့် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရန်လိုအပ်ကြောင်း ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO မှ ပြောကြားလိုက်ပြီဟု ဗြိတိန်မှ Daily Mail သတင်းစာက ရေးသားဖော်ပြခဲ့သည်။ အဆိုပါ ဗိုင်းရပ်စ်ကို ယခင်က မြင်တွေ့ခဲ့ဖူးခြင်းမရှိပေ။ […]
”မိဘကို လုပ်ကျွေးပြုစုသူတိုင်း လက်ငင်း ခံစားရမယ့် အကျိုး ၁၂ ပါး”
မိဘကို လုပ်ကျွေးပြုစုရပြီး ရလာတဲ့ ပီတဟာ ဘာနဲ့မှ မလဲနိုင်ပါဘူး…ဒါကြောင့်လည်း သားလိမ္မာ သမီးအလိမ္မာတွေဟာ မိဘတွေကို လုပ်ကျွေးပြုစုကြတာပေါ့…..ဒီလို ပီတိ အပြင် မိဘကို လုပ်ကျွေးပြုစုတဲ့သူတွေ လက်တွေ့ခံစားရမယ့် အကျိုး ၁၂ ပါးရှိပါတယ်…အဲတာတွေကတော့… ၁။ မိဘကို ကျွေးမွေး ပြုစုရန် မိမိမှာ ဖြူစင်သော စေတနာ […]
“အရှေ့အရပ် နဲ့ တောင် အရပ် ကိုသာ ခေါင်းပြု အိပ် ရခြင်း အကြောင်း ရင်း”
ဘာကြောင့် အ ရှေ့အရပ်နဲ့ တောင်အရပ်ကို ခေါင်းပြုပြီး အိပ်သင့်တာလဲ?ကျွန်မတို့ ငယ်ငယ်က အရှေ့ဘက်နဲ့ တောင်ဘက်ကို ခေါင်းပြုပြီး အိပ်ရ တာ ကို ဘာသာရေး အရ ၊ ထုံးတမ်းစဉ်လာ အရ အိပ်ရတယ် လို့ပဲ ထင်ခဲ့တယ်။တကယ်တော့ အရှေ့ရပ် နဲ့ တောင် အရပ်ကို […]